यसरी बन्दागोभीको पातलाई छाती र खुट्टामा राख्नाले के हुन्छ ? हेर्नुस !
Home/स्वास्थ्य जिवनशैली/यसरी बन्दागोभीको पातलाई छाती र खुट्टामा राख्नाले के हुन्छ ? हेर्नुस !
एजेन्सी – बन्दागोभीको पात हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै लाभदायक छ । यसले चाडैं नै रोगलाई निको पार्छ । आज हामी तपाईंलाई यसबाट हुने फाईदाहरुको बारेमा जानकारी दिन्छौं ।
घाउको कारणले गर्दा सुनिनु: यदि तपाईंको हातखुट्टा र गोलीगाँठो आदि ठाउँमा घाउचोट लागेको कारणले गर्दा सुनिएको छ भने , तपाईंलाई बन्दागोभीको प्रयोग निकै नै लाभदायक हुन्छ । यसको लागि सुनिएको ठाउँमा बन्दागोभीको पातलाई हाल्नुहोस् । र यसलाई पट्टिले बाँध्नुहोस् ।
बारम्बार टाउको दुख्नु: ब्यस्त दिनचर्यामा थकान र तनावले गर्दा टाउको दुख्ने समस्या हुनु निकै नै सामान्य कुरा हो । बन्दागोभीलाई टाउकोमा राखी टोपी लाएर सुत्नुहोस् । बिहान हुने परिणाम देखि तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ ।
स्तनपानको कारणले दुख्नु: केही महिलाहरुलाई स्तनपानको कारणले गर्दा धेरै दुखाईको महशुश हुने गर्छ । तर यसको दुखाईलाई बन्दागोभीको पातको मद्धतले कम गर्न सकिन्छ । यसको लागि बन्दागोभीको ताजा पातलाई आफ्नो स्तनमा राख्नुहोस् । दुखाई निको भएपछि मात्र यसलाई निकाल्नुहोस् ।
थाइरोइड ग्रन्थि: थाइरोइड ग्रन्थि घाँटीको तल्लो भागमा हुन्छ । यस ग्रन्थिले पाचन प्रणालीमा हर्मोनलाई उत्पन्न गर्ने काम गर्छ । यस ग्रन्थिको कार्यलाई राम्रो बनाई राख्नको लागि राती घाँटीमा बन्दागोभीको पातलाई राखी पट्टीले छोपेर राख्नुहोस् ।
के तपाईलाई आफ्नो खुट्टाबारे यी कुरा थाहा छ ? थाहा नभए जानी राखौँ
चायाँलाई सखाप पार्छ कागती अनि जीराले, यस्ता छन् अन्य घरेलु उपाय